अमेरिकी पत्रिका कार्यालयमा आक्रमण, ५ को मृत्यु- विश्व - कान्तिपुर समाचार
मेरिल्यान्ड — अमेरिकाको म्यारिल्यान्ड राज्यको एक दैनिक अखबारको कार्यालयमा भएको बन्दुक आक्रमणमा कम्तीमा ५ जनाको मृत्यु भएको छ । गोली प्रहारमा अन्य केही घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।
हमलाकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ । क्यापिटल गजेट अखबारका संवाददाताका अनुसार बन्धुकधारी अखबारको कार्यालयको ढोकाबाटै गोली चलाएको उल्लेख छ ।
सेलेन सान फेलिसले सीएनएनलाई गोली प्रहारपछि आफू डेस्कको तल लुकेर ज्यान जोगाएको बताइन् । अपराध संवाददाता फिल डेभिसले आक्रमणपछि अखबारको कार्यालय कुनै युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तो भएको जनाए ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकी सञ्चार अधिकारी सराह हकाबी सेन्डर्सले पत्रकारविरुद्धको आक्रमण अमेरिकामाथिकै भएको भन्दै हत्याको निन्दा गरेकी छन् । एनापोलिसस्थित क्यापिटल गजेट भवनभित्र आक्रमण भएको हो ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत अखबारलाई हिंसात्मक आक्रमण गर्ने धम्की दिइएको थियो । यद्यपी, आक्रमणको कारणबारे भने केही पत्ता नलागेको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले आक्रमण योजनाबद्ध रूपमा गरिएको भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको जनाएका छ ।
आक्रमणमा संलग्न मेरिल्यान्ड राज्यका ३० वर्षीय एक पुरुषलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरी अधिकारीले पक्राउ परेका व्यक्तिले अनुसन्धानमा असहयोग गरिरहेको जनाएका छन् । आक्रमणमा ठूलो घातक हतियारको प्रयोग गरिएको जनाइएको छ । उनको झोलाबाट नक्कली ग्रिनेड फेला परेको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ ।
आक्रमणपछि अन्य विभिन्न कार्यालय रहेको व्यापारिक भवनबाट करिब २ सय जनाको सकुशल उद्धार गरिएको थियो ।
प्रकाशित : असार १५, २०७५ २१:३७
विश्वविद्यालय वार्ताका लागि तयार
सुर्खेत — विद्यार्थीहरूले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) का उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालाको गाडी तोडफोड गरेका छन् । विभिन्न मागसहित आन्दोलनरत इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीले शुक्रबार एमयू केन्द्रीय परिसरमा पार्किङमा राखिएको गाडी तोडफोड गरेका हुन् ।
१२ दिनदेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीले केन्द्रीय कार्यालयमा लगाएको ताला विश्वविद्यालय प्रशासनले तोडेको थियो । विश्वविद्यालय पदाधिकारी र आन्दोलनरत विद्यार्थीबीच वार्ताको टुंगो नलाग्दा विद्यार्थी तोडफोडमा उत्रेको बताइएको छ । विश्वविद्यालय प्रशासन आफ्ना मागप्रति जवाफदेही नभएको भन्दै विद्यार्थीले एमयूको विस्तारित कार्यालयमा समेत ढुंगामुढा गरे ।
गाडी तोडफोड र कार्यालयमा ढुंगामुढा गर्ने ६ विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । एमयूको केन्द्रीय क्याम्पस परिसरमा रिले अनशन सुरु गरेका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि विद्यार्थीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । त्यस क्रममा निकुञ्ज पाण्डे, न्युटन वली, रामचन्द्र भण्डारी, केशव खडका, निर्मल बीसी र रामकुमार शाह पक्राउ परेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले हाइड्रो इन्जिनियरिङको पूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध गराइनुपर्ने, गोल्डेन चान्स परीक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण प्रयोगात्मक कक्षा पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने र १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । त्यस्तै, लाइब्रेरीमा पर्याप्त पुस्तक उपलब्ध गराउनुका साथै इन्जिनियरिङ संकायको छुट्टै लाइब्रेरीको व्यवस्था गराइनुपर्ने, सम्पूर्ण विषयको विषयगत शिक्षकको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग छन् ।
यता, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले वार्ताका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए । उनले वार्ताको समय निर्धारण हुनुअगाडि नै विद्यार्थी आक्रोशित भएर ढुंगामुढा र तोडफोड गरेको बताए ।
प्रकाशित : असार १५, २०७५ २१:३०